Waa Maxay Cudurka "Ebola"? - BAARGAAL.NET
✔ Admin on August 13, 2014
Qaar ka mid ah cudurka VHF waxa ay yihiin kuwo baaba'a, laakiin kuwo kale waxay noqon karaan kuwo raaga.
Badanaaba waxay dhaliyaan dhiig-bax, iyo waxyaabo kale oo lagu garto.
Dhiig-baxa aad buu u yaryahay in uu sababo dhimasho.
•New World arena viruses
Sida caadada ah, dadka waxay cudurkan VHF ka qaadaan shillinta, kaneecada ama jiirka. Dadka waxa cudurkan qaadi karaan marka ay soo gaaraan kaadida, saxarada iyo waxyaabo kale ee ka yimaada jiirka cudurka qaba. Dadku waxay kale oo ay ka qaadi kara cudurka VHF qaniinyada kaneecada ama boodada, ama burburinta shillinta. Mararka qaarkooda, ma cada sida dadka ay cudurkan u qaadaan. Ma ka qaadi karta cuduradaan dad kale?
Qaar ka mid ah feyruusyada cudurka VHF – oo ay ka jiraan Ebola,
Marburg iyo Lassa – waxay ku faafin karaan cudurka qof ilaa ka qof. Ayaga waxay ku faafiyaan dadka la leh xiriirka dhow dadka qaba cudurka ama dheecaanka jirkooda. Dadka waxay kale oo ay ka qaadi karaan waxyaabaha soo gaara cudurka sida irbidaha ama siliingo.
* Madax xanuun
* Kalabaxyo xanuun
* Murqo xanuun
* Calool xanuun
* Nabro Jirka ka soo yaaca
* Indhaha oo gaduuta
* Hingo (hiccup)
* Dhiig ka yimaada jirka gudihiisa ama banaankiisa
Tallalada ayaa loo helaya qaar ka mid ah cudurada VHF, waxa ku jira cudurka indho caseeyaha. Baaritaanka tallaalka waxa lagu sameeyey feyruusyada kale ee VHF. Meelaha laga helay cudurkan ee dabiiciga ah,
dadaalka lagula dagaalamo kaneecada iyo shillinta waxay caawin karan ka hor-taga qaar ka mid ah noocyada cudurka VHF.
Nasiib xumo ilaa iyo hada wax daawo ah lama hayo, inkastoo dadka qabacudurkaan la siiyo daawooyin kaalmaati ah sida: fuuq celin, cadaadiskadhiiga oo la kontoroolo, Oksajiin in la siiyo qofka iyo in laga daaweeyo infekshanada kale ee la socda cudurka.